जैविक विविधताको दृष्टि, लोप होइन
तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ
जैविक विविधताको दृष्टि
ग्रहको जैविक विविधतालाई तपाईंको मद्दत चाहिन्छ!
ग्रहको जैविक विविधता (बिरुवाहरू, जनावरहरू, अन्य जीवन स्वरूपहरू, र बासस्थानहरूको प्रकार र संख्या) स्थानीय र विश्वव्यापी रूपमा घट्दै गएको छ र त्यति मात्र होइन, तीव्र पतन पनि हुँदै गइरहेको छ। धेरै प्रजातिहरू मर्दै छन्; यो प्रति दिन 50-150 अनुमान गरिएको छ। जस्तै बाँदर, चराचुरुङ्गी, पुतली, बोटबिरुवा र सम्पूर्ण इकोसिस्टमका प्रजातिहरू सदाका लागि लोप हुँदैछन्। हानि र धम्कीपूर्ण क्षतिको सरासर परिमाण अचम्मलाग्दो छ।
जैविक विविधताको हानि मानिसको कार्य र निष्क्रियताको परिणाम हो। हामी यसलाई हाम्रो पुस्ताको विरासत हुन दिन सक्दैनौं कि हामीले यो हुन दियौं ?
सँगै हामी निष्क्रियता रोक्न सक्छौं!
हामीसँग एउटा योजना छ (तल हेर्नुहोस्) सरकारहरूलाई वास्तवमै सामूहिक विलुप्त हुने विषयलाई सम्बोधन गर्न। यद्यपि यो काम गर्नको लागि प्रकृतिलाई तपाईंको सहयोगको सख्त आवश्यकता छ ।
तपाईलको केहि न्यूनतम समय मात्र आवश्यक छ र यसले तपाइँलाई केहि खर्च गर्दैन वा तपाइँको तर्फबाट थप प्रयासको आवश्यकता पर्दैन! (दान र स्वयंसेवा वैकल्पिक छन्)
जैविक विविधता दृष्टि अभियानले राजनीतिज्ञहरूलाई वैज्ञानिकहरूले जैविकविविधताका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू गर्न आह्वान गर्दछ।
जैविक विविधता भिजन अभियानमा सामेल भए, तपाईंको आवाज गणना हुन्छ
तर त्यहाँ नरोकिनुहोस्, हामीलाई यो भाइरल बनाउन मद्दत गर्नुहोस् (कृपया हाम्रो पृष्ठहरूमा जानुहोस् र सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरू सामेल गर्नुहोस्)